﻿कोरोना जाँच तथा उपचारका लागि नोबेलमा छुट्टै ओपीडी - Purbeli Nepal
नोबेल शिक्षण अस्पतालले कोरोना ओपीडी सेवा सञ्चालन गरेको छ ।
कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएका व्यक्ति र होम आइसोलेशनमा बसेका संक्रमितको परीक्षणका लागि नोबेलले निःशुल्क कोरोना ओपीडी सेवा सञ्चालन गरेको हो ।
पीसीआर परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएमा संक्रमित व्यक्ति होम आइसोलेशनमा बस्ने गर्छन् । स्वास्थ्यमा समस्या बढेमा कोभिड अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार गर्ने गरिन्छ ।
तथापी कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएका तर, पीसीआर परीक्षण नगराएका विरामीहरु उपचार पाउनबाट बन्चित बन्दै आएका थिए ।
होम आइसोलेशनमा बसेका संक्रमितको स्वास्थ्य परीक्षणमा पनि समस्या हुँदै आएको थियो । यस्तै अनेक समस्या बेहोर्दै आएकाहरुको उपचारमा सहजताका लागि कोभिड ओपीडी सेवा सञ्चालन गरिएको नोबेल अस्पतालका निर्देशक डा. राजेश नेपालले बताए ।
नोबेलले बेग्लै क्षेत्र छुट्याएर बिहान ९ बजेदेखि ५ बजेसम्म कोभिड ओपीडी सञ्चालन गरेको हो । सो ओपीडीमा डाक्टरहरुले उच्च सावधानी अपनाएर विरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गर्छन् । ओपीडी दिउँसो मात्र सञ्चालन भएपनि त्यस्ता विरामीको सीटीस्क्यान सेवा भने २४ सै घण्टा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएका व्यक्ति र होम आइसोलेशनमा बसेका संक्रमितको उपचारमा समस्या हुँदै आएको पाइएकाले उनीहरुको सहजताका लागि निःशुल्क कोभिड ओपीडी सञ्चालन गरिएको नोबेल अस्पतालका सञ्चालक डा. सुनिल शर्माले जानकारी दिए ।
नोबेलमा सरकारले तोकेको अधिकतम शुल्कभन्दा ५ सय रुपैयाँ कम अर्थात १ हजार ५ सय रुपैयाँमै पीसीआर परीक्षण हुँदै आएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा नोबेलमा कोरोना संक्रमितको उपचार पनि निःशुल्क गरिदै आएको छ ।